ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆေးသစ်တစ်မျိုး ထိုင်းတက္ကသိုလ်မှ ဖော်စပ်အောင်မြင် – WunYan
ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆေးသစ်တစ်မျိုး ထိုင်းတက္ကသိုလ်မှ ဖော်စပ်အောင်မြင်
တစ်နှစ်မှာ ရောဂါရှင် တစ်သိန်းခန့်ခံစားနေရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါရှင်တွေ အတွက် ဆေးသစ် တစ်မျိုးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ရမ်စစ် တက္ကသိုလ် rangsit university thailand ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသီ ဆေးကျောင်းသားတွေက အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။
ဆေးခြောက်အဆီနဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ oromucosal spray ကို လူနာရဲ အာခေါင်ကို ဖြန်းပေးတဲ့ စပရေးနည်းနဲ့ သုံးတဲ့အခါ ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေ အန်တာနဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာတွေကို ပျောက်ကင်းတာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
ယခု ဖော်ထုတ်တဲ့ ဆေးဟာ နာကျင်မှုတွေ မနေနိုင်အောင် ခံစားလာရတဲ့အခါ ဆေးရည်ကို အာခေါင်ဖြန်းပေးတဲ့ နည်းဟာ အမြန်ဆုံး အာနိသင် သက်ရောက်ပြီး လူနာတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ သုံးနေတဲ့ ကီးမို့ အမေရိကန် ပြည်နယ်တချို့ နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ခုလို ဆေးခြောက် အရွက်ကနေ ဆေးနည်းတွေ ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်၊ ဖမ်းဆီးမိတဲ့ ဆေးခြောက်တွေကို မီးရိူ့ ပြစ်မယ့်အစား လူသားတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် နေရာမှာ သုံးလိုက်တာဟာ အမှန်တကယ် ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် ကယ်တင်ရာရောက်ကြောင်း ဆေးသုတေသီတွေက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆေးသစ်ကို (FDA) ကနေ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကင်ဆာရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးရုံတွေမှာ ကုသခွင့် ပေးတော့မှာပါ။ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေကို ဆေးကုသတဲ့အခါ စရိတ်စကကြီးမားပြီး ကုရင်းသေသွားသူ ဒဏ်မခံနိုင်တော့လို့မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေသူတွေ ဆေးရုံမှာ ရက်ကြာကြာ ကုသနေရတဲ့ ပြသနာတွေကို ယခုဆေးနည်းသစ်က အကုန်အကျ သက်သာစေမှာဖြစ်ပြီး ဝေဒနာအပြင်းအထန် ခံစားနေရသူတွေအတွက် ၀မ်းသာစရာ ဆေးသစ်ဖြစ်မှာပါ။။။။
ကငျဆာရောဂါ ဝဒေနာရှငျမြားအတှကျ ဆေးသဈတမြိုး ထိုငျးတက်ကသိုလျမှ ဖျောစပျအောငျမွငျ
တဈနှဈမှာ ရောဂါရှငျ တဈသိနျးခနျ့ခံစားနရေတဲ့ ကငျဆာရောဂါရှငျတှေ အတှကျ ဆေးသဈ တဈမြိုးကို ထိုငျးနိုငျငံ ရမျစဈ တက်ကသိုလျ rangsit university thailand ရောဂါဗဒေဆိုငျရာ သုတသေီ ဆေးကြောငျးသားတှကေ အောငျမွငျစှာ စမျးသပျ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပွီလို့သိရပါတယျ။
ဆေးခွောကျအဆီနဲ့ ဖျောစပျထားတဲ့ oromucosal spray ကို လူနာရဲ အာခေါငျကို ဖွနျးပေးတဲ့ စပရေးနညျးနဲ့ သုံးတဲ့အခါ ဝဒေနာခံစားနရေသူတှေ အနျတာနဲ့နာကငျြကိုကျခဲနတောတှကေို ပြောကျကငျးတာကို တှေ့ ခဲ့ရပါတယျ။
ယခု ဖျောထုတျတဲ့ ဆေးဟာ နာကငျြမှုတှေ မနနေိုငျအောငျ ခံစားလာရတဲ့အခါ ဆေးရညျကို အာခေါငျဖွနျးပေးတဲ့ နညျးဟာ အမွနျဆုံး အာနိသငျသကျ ရောကျပွီး လူနာတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံး ဆေးဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ သုံးနတေဲ့ ကီးမို့ အမရေိကနျ ပွညျနယျတခြို့ နဲ့အခွားနိုငျငံတှမှောလညျး ခုလို ဆေးခွောကျ အရှကျကနေ ဆေးနညျးတှေ ထုတျလုပျနပွေီဖွဈပါတယျ၊ ဖမျးဆီးမိတဲ့ ဆေးခွောကျတှကေို မီးရိူ့ ပွဈမယျ့အစား လူသားတှအေတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ နရောမှာ သုံးလိုကျတာဟာ အမှနျတကယျ ရောဂါ ခံစားနရေတဲ့ သူတှအေတှကျ ကယျတငျရာရောကျကွောငျး ဆေးသုတသေီတှကေ ထောကျပွခဲ့ပါတယျ။
ဒီဆေးသဈကို (FDA) ကနေ တရားဝငျ ခှငျ့ပွုခကျြရတာနဲ့ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကငျဆာရောဂါသညျတှအေတှကျ ဆေးရုံတှမှော ကုသခှငျ့ ပေးတော့မှာပါ။ ကငျဆာရောဂါ ခံစားနရေတဲ့ သူတှကေို ဆေးကုသတဲ့အခါ စရိတျစကကွီးမားပွီး ကုရငျးသသှေားသူ ဒဏျမခံနိုငျတော့လို့မိမိကိုယျမိမိ သတျသသေူတှေ ဆေးရုံမှာ ရကျကွာကွာ ကုသနရေတဲ့ ပွသနာတှကေို ယခုဆေးနညျးသဈက အကုနျအကြ သကျသာစမှောဖွဈပွီး ဝဒေနာအပွငျးအထနျ ခံစားနရေသူတှအေတှကျ ဝမျးသာစရာ ဆေးသဈဖွဈမှာပါ။။။။
Faculty of Pharmacy Rangsit University Research and development of cannabis relief has been successful.
Dean and Faculty Researchers Faculty of Pharmacy Rangsit University Cannabis has made cannabis, relieves pain and vomiting from the chemotherapy treatment for cancer patients. This isalisting request. The Food and Drug Administration (FDA) will continue to use the patient.